यस्तो उपाय गर्नुहोस, ब्रेकअप पछि पनि फिर्ता आउनेछिन् तपाईको Girlfriend !::Leading Nepal News
यस्तो उपाय गर्नुहोस, ब्रेकअप पछि पनि फिर्ता आउनेछिन् तपाईको Girlfriend !
एजेन्सी । यदि तपाई कुनै युवतीलाई चोखो माया गर्नुहुन्छ तर उनी तपाईबाट टाढा भइन् भने तपाई यस्तो उपाय गरेर उनलाई नजिक ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर तपाई कुनै अनजान युवती मनपर्यो भन्दैमा यस्तो उपाय नगर्नुहोला किनकि यस उपायले कुनै अपरिचित युवतीमाथि काम गर्दैन । तपाईले तलको मध्ये कुनै पनि उपाय गर्नसक्नुहुन्छ ।
पान को पात: एउटा पानको पातमा सोमवारबाट शुक्रवारसम्म दिनहुँ जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उसको नाम लेख्नुहोस् । त्यसपछि शुक्रवार नै यी सबै पातहरु कुनै नदी वा तलाउमा लगेर बगाइदिनुहोस् ।
प्रेमिकाको रुमाल: जुन युवतीसँग तपाई प्रेम गर्नुहुन्छ उसको रुमाल आफूसँग राख्नुहोस् र दिनहुँ तपाईको सिरानीमुनी राखेर सुत्नुहोस् । जब सम्म उनको तपाईसँग पुन मिलन हुँदैन तबसम्म यसरी नै राख्नुहोस् । उनीसँग तपाईको मिलन भएपति त्यसलाई हटाइदिनुस् ।यो पनि पढ्नुहोस्…
युवतीहरुले ब्रेकअपपछि गर्छन् यस्तो अनौठो हर्कतहरु !
एजेन्सी । ब्रेकअप भएपछि प्रायः केटीहरुको हाउभाउमा धेरै नै परिवर्तन आउने गर्छ । ब्रेकअप पछि धेरै जोडीहरु आफूलाई पुर्ण रुपमा टुटेको महसुस समेत गर्छन् । केही केटीहरु भने ब्रेकअप पछि आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्तित हुने गर्छन् । आउनुहोस हेरौ ब्रेकअप पछि केटीहरुले गर्ने विचित्र हर्कतहरु–